Juventus Oo Ku Dhaw Saxiixa Xiddig U Ciyaara Chelsea. | Somalia News
Fursado shaqo oo ka bannaan Hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed
Muqdisho (SONNA)- Guddiga Qaranka Ee Shaqaalaha Rayidka Dowladda Federaalka ah, wuxuu dadweynaha Soomaaliyeed oo shaqo doonka ah u baahinayaa sagaal (9) jego oo ka bannaan Hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed. ciddii leh aqoonta iyo qibradda shaqooyinkan shuruudahooda halkan ku lifaaqan, waxaa lagu wargelinayaa inuu ka codsan karo bogga Guddiga oo halkan hoosa kaaga muuqdo. Nasiib wacan Fadlan Link-gan hoos riix si aad u dalbato shaqooyinkan; http://ncsc.org.so/jobs Haddii aad u baahato caawin, fadlan la soo xiriir ciwaanka hoos ku qoran; [email protected] Haddii aad u baahato caawin dhanka online application ah, fadlan la xiriir lambaradan hoose; +252-615-499-078 / +252-615-503-693
FAO oo sheegtay inay yaraatay xawaaraha duufaanta GATI
Share on Facebook Tweet on Twitter Hay’adda FAO ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Beeraha iyo cunada ayaa sheegtay in ay iminka daciiftay oo ay tabar dareysay duufaanta GATI ee xeebaha bari ee Soomaaliya ku dhufatay 22 bishaan November. Duufaanta ayaa xawaaraheedu yaraaday 12-saac ee la soo dhaafay, iyada oo dhanka waqooyi galbeed u jiheysatay. Warbixinta ay hay’adda FAO soo saartay ayaaa lagu sheegay in roobab xoogleh oo la xiriira duufaanka ay da’i doona illaa 26 November 2020. Saameynta duufaanta ay deegaanka u geysatay ayaa weli jirta sida FAO tilmaantay. Dhanka Somaliland waxay sheegtay in baddu weli kacsan tahay, isla markaana aan la isku haleyn karin in laga kalluumeysto. Sidoo kale dhanka Somaliland waxaa la saadaalinaya roobab dhex dhexaad ah sadaxda cisho ee soo socota ka da’i doono deegaannada maamulkaas. Puntland ma jiraan roobab la faliyo in ay hooraan sida warbixinta lagu sheegay. SHARE Facebook Twitter Previous articleOGEYSIIS: Fursado shaqo oo ka bannaan Hay’adda Duulista Rayidka Soomaaliyeed
Juventus Oo Ku Dhaw Saxiixa Xiddig U Ciyaara Chelsea.
Weeraryahanka kooxda Chelsea ee Olivier Giroud ayaa ku dhaw kooxda Juventus sida ay sheegayaan wararku.
Olivier Giroud ayaa lagu soo waramayaa in uu heshiska shaqsiga la gaadhay kooxda Juventus xilli ay kooxda Serie A-da ka ciyaarta u aragto badalka Luis Suarez.
Kooxda uu hogaamiyo tababare Pirlo aya raadinaysa weeraryahan cusub kadib markii ay iska fasaxday Gonzalo Higuain kaas oo xor uga tagay kooxda.
Saxafiga reer Italy ee Gianluca di Marzio ayaa sheegaya in heshiis la meel dhigeen xiddiga 33 jirka ah ee reer France kaas oo qalinka ku duugi doona heshiis 2 sano ah.
Giroud ayaa doonaya in uu isaga tago kooxda chelsea maadama uuna boos joogto ah ka heli doonin kooxda xilli ciyaareedka cusub maadama ay u badantahay in uu ka dambayn doono xiddigaha Timo Werner iyo Tammy Abraham.
Previous articleHindiya iyo Shiinaha oo soo afjaraya xiisadda labada ciidan ee xadka lagu muransan yahay
Next articleSwitzerland Provides Support to UNFPA Somalia for Improved Maternal and Newborn Health and the Fight against FGM – Somalia – ReliefWeb
Fursad Qaaliya :ma ubaahantahay in caruurtaadu mudo koban ku bartaan higaadda, quranka & Caqiida islaamka ?
Welcome to Amaano Quran Online WhatsApp: +252634484123IMO: +252634484123 Amaano Quran Online waa dugsi quraan online ah oo loogu talo galay qurbajoogta soomaaliyeed , meelkasta oo ay kaga nool yihiin adduunka . Dugsiga waxa wax ka baran kara Caruurta iyo dadka waaweyn labadaba. Dugsigu waxa uu fursado gaar ah u hayaa waalidiinta qurbaha kunool , iyadoo laga caawinayo waxbarashada iyo tarbiyadda ubadka.  Dugsigu waxa uu kuu diyaariyay macalimiin rag iyo haweenba leh oo aqoon buuxda u leh casharada ay bixinayaan .  Manhaj tayo leh oo u gaar ah dugsiga.  Duruustu waxay ku baxayan afsoomaali , sido kale waxa jira qayb ku baxda English – to – English oo loogu talo caruurta aan fahmaynin af-somaliga . Wakhtiga xiisadda loo galayo ardayga ayaa dooranaya . Koorsoyinka dugsiga lagu barto waxa kamid ah : –1) Quraanka kariimka ah2) Higaadda3) Carabida4) Xadiithka5) Caqiiqda islaamka6) Fiqhiga7) Siirada nabiga صلى الله عليه وسلم8) Tarbiyadda caruurta9) Baridda caruurta ( Salaadda iyo axkaamta islaamka)10) Tafsiirka iyo tajwiidka quraanka11) Barashada Afsoomaaliga ( Afka hooyo) Hadda la xiriir maamulka oo is dinwaangali : Whatsapp: +252634484123IMO: +252634484123Skype: Amaano Quran OnlineGmail: [email protected] Booqo webiste ka dugsiga :www.amaanoquranonline.com Xafiiska Shabakada Allbanaadir.comMuqdisho [email protected] - Advertisement -
Abiy oo digniin culus oo ku saabsan daagalka Tigray u diray beesha caalamka
Addis Ababa (Caasimada Online) – Ra’iisal wasaaraha Itoobiya, Abiy Axmed ayaa si kulul uga hadlay baaqyo kala duwan oo dhawaan kasoo baxaya beesha caalamka, kuwaasi oo la xiriira dagaalka ay dowladiisu kula jirto maamulka maylka adag ee Tigrey-ga. Abiy ayaa bayaan uu soo saaray uga digay inaysan beesha caalamka isku dayin tallaabooyin aanan la mahdin oo falal sharci darro ah oo ku aadan faragelinta xaalada ka taagan gudaha Itoobiya. “Waxaan carabka ku adkeynayaa in Itoobiya ay leedahay awood isla markaana ay ku rajo weyn tahay inay xaliso xaaladda iyadoo loo marayo sharciga iyo xeerarka caalamiga ah,” ayaa lagu bayaan kasoo baxay xafiiska Ra’iisul Wasaaraha. Waxa uu sheegay inaysan marnaba aqbaleyn faragelin lagu sameeyo arrimaheeda gudaha, xili ay isasoo tarayaan cadaadisyo caalami ah oo ku saabsan xabad joojin la dhex dhigo labada dhinac, isla markaana la gaarsiiyo gobolka Tigreyga gar-gaar bini-aadanimo. Ra’iisal wasaaraha ayaa ka codsaday beesha caalamka inay u diyaargaroobaan in ‘xaaladda ay faraha lasoo galaan tan iyo inta xukuumadda ay ko codsaneyso in laga caawiyo qalalaasaha haatan ka taagan gobolka Tigreyga’. Waxa kale oo uu hoosta ka xariiqay inay waajib tahay in beesha caalamku ay qaddariyaan mabaa’diida aasaasiga ah ee dhigayo in la sameyn wax faragelin ah sida ku xusan xeerarka caalamiga ah, iyada oo uu maamulka Tigreygu ku baaqay wada-hadal ay iska dhago tireyso dowladda federaalka. Ugu dambeyntiina waxa uu xusay inuu soo dhaweynayo walaaca ay muujiyeen beesha caalamka, ee ka wal-walaya xaalada Itoobiya, kaasi oo uu ku tilmaamay mid aanan gaarsiineyn heerka ay maleysanayaan. Hadalkan ayaa imanaya xili ay beesha caalamku cadaadis xoogan ku saareyso dowladda federaalka Itoobiya in miiska wada-hadalka ay ku xaliso xiisada dagaalka isku rogtay ee kala dhaxeysa maamulka TPLF, midaasi oo uu ka biyo diiday Abiy Axmed.
Maxaa laga filan karaa shirka musharaxiinta ee Muqdisho?
MUQDISHO — Magaalada Muqdisho, waxaa maalinkii shanaad ka socda shirka qaar kamid ah musharixiinta madaxtanimada Soomaaliya, kaasi oo ay uga arrinsanayaan waxa ay ka yeelayaan qaabka ay dowladda hadda jirta ay u maamulayso doorashada. Musharaxiinta ayaa sheegay inaysan ku qanacsaneyn guddiga doorashada ee ay dowladdu soo magacawday, waxayna dalbadeen in isbeddel lagu sameeyo. Maalmihii dhowaa ayaa waxaa shirka ku biirayey dhinacyo kala duwan sida odayaasha dhaqanka, culimada, ururada bulshada rayidka iyo hoggaanka labada aqal ee baarlamanka. Dowladda Soomaaliya wali si rasmi ah ugama aysan hadlin shirkan marka laga soo tago xubno dowladda ka tirsan oo ay isku mawqif yihiin musharixiinta oo shirka ka qayb galay. Hadaba shirkan musharixiinta maxaa laga filan karan, maxay tahay ujeedada ay musharixintu ka leeyihiin shirkan? Waxaa warbixin arrimahaasi ku aadan nooga diyaariyay Wariya VOA-da ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Villa Soomaaliya Oo Abaabuleysa Banaanbax Berri Ka dhaco Gudaha Muqdisho
Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp Sida aan xogaha ku helnay Banaanbax ayaa laga abaabulayaa Gudaha Muqdisho,kaas oo lagu wado in berri Oo khamiis ah dhaco. Madaxtooyada Soomaaliya ayaa lacag ku bixisey sida la sheegay Dibad baxa,waxaana lasoo tebinayaa in Lagu taageerayo Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Ilo ka ag dhaw Xafiiska Madaxweynaha Dalka ayaa inoo xaqiijiyey arintaan si gaar ah waxa dibad baxa loogu xilsaaray inay qaban qaabiyaan,Xasan Cabdullaahi Maxamed oo La dhashay Madaxweynaha iyo shakhiyaad la shaqeyn doono. Dib udoorashada Madaxweynaha Qaranka ayaa dedaal badan loo galayaa,iyadoo hardan adag ay Villa Soomaaliya kala kulmeyso Murashaxiinta Mucaaradka ah Ee 14 isbaheystay ah. Legdanka socda kasokoow Madaxweyne Farmaajo ayaa helaya Gurmad Siyaasadeed,isagoo Dawlada Qatar iyo Itoobiya ay ballan qaadeen inay laba jibaarayaan Hamigiisa inay ka dhabeeyaan. Sidaas oo kale waxaa jirta Qorsheyaal lagu kala fur furayo Murashaxiinta Midoobay Ee Dawlada kasoo horjeeda kuwaas oo kusugan Hadda Xamar. Siyaasada oo ah mid aan saaxiib joogto ah laheyn ayaa laga yaabaa in labo xalay heshiiyey Subixii kala irdhoobaan,sidaas ay tahayna Madaxweyne Farmaajo,Mahdi Guuleed,Dalxa & Taliye Fahad Yaasiin ayaa wadajir waxay udoonayaan in Nabad iyo Nolol dib usoo laabato. Facebook Twitter Google+ Pinterest WhatsApp